Saiti - Takagadzirwa kuSpain
Kugamuchirwa Takaitwa muSpanish Magazine, iyo nzvimbo yaunowana zveruzhinji pamusoro peGourmet michero yakanakisisa muSpanish yakadai sewaini, cheeses, Iberian, maorivhi, nezvimwe. Nzvimbo dzinoshamisa dzinoshanyira, varidzi vadzo, zvakanakisa kukurudzirwa, zvinotamba paGran Vía nezvimwe zvakawanda.
Takaitwa Spain ndiyo nyika nemagariro, chili, waini, mumhanzi ... A manyorero yemanyorero Spanish upenyu uye anobatsira munhu anoda yakawanda yokunyatsoongorora zvinoshamisa Spain, kana sezvo tourist kana ave mugari wenyika iri guru.
Kutanga, tinokukurudzira kuti upinde mudura rekutsvaga kuburikidza nehukuru kune zvigadzirwa zveSpain: www.made-in-spain.com
Next mumhanyi; Bodegas Navarro López
Imwe pfungwa pamusoro "Hello"
31 December, 2018 pa 8: 20 pm
Kuyemura kushivirira iwe kuisa mubhogi rako uye ruzivo rwakanyatsonaka iwe waunopa.
Zvakanaka kuti uwane rimwe blog kamwechete munguva imwechete iyo isiri iyo yakabva kune rimwe rehedhed material.
Zvinoshamisa kuverenga! Ndachengeta site yako uye ini ndinosanganisira RSS yako feeds kuGoogle account yangu.